ရုပ်ရှင် ရိုက်ခါစက ဖိနပ် နဲ့ပေါက်ပြီး ဆုံးမခံခဲ့ရ တဲ့ အကြောင်း ခင်လှိုင်က ပြန်ပြောင်းပြောပြ လာ – Zartiman
လူ ရွှင်တော်/သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်က ” ကျွန်တော်တို့ ကသဘင်လောက က လာတာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှကိုမသိတာ လေ…သဘင်မှာကျတော့ ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတွေ ဟိုးအဝေးကြီးကနေလှမ်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက် Over Act လုပ်ရတာပေါ့ အမူအယာတွေ ပို လုပ်ရတာပေါ့….ဒါမှ အဝေးကမြင်သာတာဆိုတော့လေ…ရုပ်ရှင်ကျတော့ ကင်မရာသေးသေးလေးထဲမှာ ကိုယ့်အမူအရာကို ထင်းနေအောင် လုပ်ပြရတာဆိုတော့ စရိုက်ခါစတုန်းက ပရိသတ်တွေက ခင်လှိုင်က အရမ်း အိုက်တင်တွေအိုဗာဖြစ်တာပဲလို့ ဝေဖန်သံတွေကြားရတယ်..။
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တကယ်အိုဗာဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်။ဒါကလည်း သဘင်လောကကို နှိမ် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး….. နယ်ပယ်ချင်းမတူတာကို ပြောချင်တာပါ” ဟု Over Acting တွေသရုပ်ဆောင် ခဲ့မိတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ တာပါ။ ခင်လှိုင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို အခိုင်အမာရရှိထားပြီး ယခုအခါမှာ လူရွှင်တော် အလုပ်သာမက ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများ ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခင်လှိုင်ဟာ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ဆိုးပေ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကိုလည်း ရိုက်ကူးဖို့ရှိနေပြီး သမီးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် သဇင်ထူးမြင့်နဲ့အတူ ပါဝင်သွားမှာပါ။ယခုလို အောင်မြင်နေပေမယ့် ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ ရုပ်ရှင်လောက ကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုကတော့ လွယ်လင့်တကူ မဟုတ်ခဲ့ပါ ဘူး။ရုပ်ရှင်စရိုက်ခါစမှာဇာတ်သဘင်လောကက လာသူဖြစ်တဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ရာမှာ အဆီအငေါ်မတည့်မှုတွေဖြစ်နေလို့ ဖိနပ် နဲ့ပေါက်ပြီးဆုံးမတာခံခဲ့ရဖူးတယ်လို့ ဦးခင်လှိုင်ကပြန်ပြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးခင်လှိုင်က ” ကျွန်တော်ဆို အရင်တုန်းက ဆရာသမားတွေက ဖိနပ်နဲ့ပေါက်ပြီးဆုံးမတာပါခံခဲ့ရ တာပါ….. သူတို့ဒီလို ဆုံးမလို့ လည်းတသက်လုံးမှတ်သွားတာပေါ့။….. ဒါရိုက်တာကိုလည်းကြောက်ရသလို ကင်မရာမန်းတွေလည်း ကြောက်ရပါတယ်…. ” လို့ ရုပ်ရှင် စရိုက်ခါစက ဖိနပ်နဲ့ပါအပေါက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ဦးခင်လှိုင်တစ်ယောက် ခက်ခက် ခဲခဲနဲ့ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်လောကအမှတ်တရ တချို့ကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
လူ ရှငျတျော/သရုပျဆောငျ ခငျလှိုငျက ” ကြှနျတျောတို့ ကသဘငျလောက က လာတာဆိုတော့ ရုပျရှငျနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာမှကိုမသိတာ လေ…သဘငျမှာကတြော့ ရာနဲ့ထောငျနဲ့ခြီတှေ ဟိုးအဝေးကွီးကနလှေမျးမွငျနိုငျဖို့အတှကျ Over Act လုပျရတာပေါ့ အမူအယာတှေ ပို လုပျရတာပေါ့….ဒါမှ အဝေးကမွငျသာတာဆိုတော့လေ…ရုပျရှငျကတြော့ ကငျမရာသေးသေးလေးထဲမှာ ကိုယျ့အမူအရာကို ထငျးနအေောငျ လုပျပွရတာဆိုတော့ စရိုကျခါစတုနျးက ပရိသတျတှကေ ခငျလှိုငျက အရမျး အိုကျတငျတှအေိုဗာဖွဈတာပဲလို့ ဝဖေနျသံတှကွေားရတယျ..။
ဟုတျတယျအဲ့ဒီတုနျးကကြှနျတျောတကယျအိုဗာဖွဈနခေဲ့တယျဆိုတာ ကြှနျတျောလညျးသိပါတယျ။ဒါကလညျး သဘငျလောကကို နှိမျ ပွောတာမဟုတျပါဘူး….. နယျပယျခငျြးမတူတာကို ပွောခငျြတာပါ” ဟု Over Acting တှသေရုပျဆောငျ ခဲ့မိတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာခဲ့ တာပါ။ ခငျလှိုငျကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးကို အခိုငျအမာရရှိထားပွီး ယခုအခါမှာ လူရှငျတျော အလုပျသာမက ဒါရိုကျတာအဖွဈ ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ဇာတျလမျးတှဲမြား ရိုကျကူးနပွေီဖွဈပါတယျ။
ခငျလှိုငျဟာ ဒါရိုကျတာအနနေဲ့ ဆိုးပေ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကိုလညျး ရိုကျကူးဖို့ရှိနပွေီး သမီးဖွဈသူ သရုပျဆောငျ သဇငျထူးမွငျ့နဲ့အတူ ပါဝငျသှားမှာပါ။ယခုလို အောငျမွငျနပေမေယျ့ ဦးခငျလှိုငျရဲ့ ရုပျရှငျလောက ကို စတငျဝငျရောကျခဲ့မှုကတော့ လှယျလငျ့တကူ မဟုတျခဲ့ပါ ဘူး။ရုပျရှငျစရိုကျခါစမှာဇာတျသဘငျလောကက လာသူဖွဈတဲ့အတှကျ သရုပျဆောငျရာမှာ အဆီအငျေါမတညျ့မှုတှဖွေဈနလေို့ ဖိနပျ နဲ့ပေါကျပွီးဆုံးမတာခံခဲ့ရဖူးတယျလို့ ဦးခငျလှိုငျကပွနျပွောငျးပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဦးခငျလှိုငျက ” ကြှနျတျောဆို အရငျတုနျးက ဆရာသမားတှကေ ဖိနပျနဲ့ပေါကျပွီးဆုံးမတာပါခံခဲ့ရ တာပါ….. သူတို့ဒီလို ဆုံးမလို့ လညျးတသကျလုံးမှတျသှားတာပေါ့။….. ဒါရိုကျတာကိုလညျးကွောကျရသလို ကငျမရာမနျးတှလေညျး ကွောကျရပါတယျ…. ” လို့ ရုပျရှငျ စရိုကျခါစက ဖိနပျနဲ့ပါအပေါကျခံခဲ့ရတဲ့အကွောငျး ပွနျပွောငျးပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ဒါကတော့ ဦးခငျလှိုငျတဈယောကျ ခကျခကျ ခဲခဲနဲ့ ဖွတျကြျောခဲ့ရတဲ့ရုပျရှငျလောကအမှတျတရ တခြို့ကို ပွနျလညျမြှဝေ ပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ။